IKZN Philharmonica Orchestra iletha owomhlaba – Bayede News
IKZN Philharmonica Orchestra iletha owomhlaba
IKZN Philharmonic Orchestra izojabulela ukuthwasa
by Bayede-News Posted on 15 August 2019 22 August 2019
IKZN Philharmonic Orchestra izojabulela ukuthwasa kwehlobo ngochungechunge lwamakhonsathi omculo oyingcwenga owaziwa ngeWorld Symphony Series Early Spring Season nozoba seDurban City Hall naseThe Playhouse kusukela zingama-22 kuNcwaba kuze kuyoba zili-12 kuMandulo wonyaka ophezulu. Njengokwejwayelekile lapha kusuke kuboshelwe izinkunzi ezaziwa umhlaba wonke, kungabe ukhuluma ngabahamba phambili ngokwamaphimbo noma ukudlalwa kwezimfijoli.
Ephawula ngalolu chungechunge lowo oyiSikhulu Esiphezulu noMqondisi Wezobuciko kuKZN Philharmonic Orchestra uMnu uBongani Tembe uthe: “IWorld Symphony Series, njengoba lolu chungechunge lwaziwa kanjalo, ihlanganiswe ukuletha eDurban City Hall unqambothi lomculo oyingcwenga. Labo abadlala izimfijoli ngabodwana bazopha abathandi bomculo umsebenzi wopiyano kaList’z nowevayolini kaMax Bruch. Ababhidisi abaphambili emhlabeni bayohola i-orchestra idlala imisebenzi yabaqambi bezingoma abehlukene kusukela kuBrahms kuya kuTchaikovky noDvorák. Kusinikeza iqholo nokuletha iNational Youth Concerto Festival esiwumcimbi waminyaka yonke. Lokhu kunikeza intsha yaseSouth Africa ecula ngayodwana ithuba lokuzibonakalisa. Lokhu sekuvulele intsha yakithi amathuba amahle endimeni yomculo. Empeleni wonke umuntu ozozihlanganisa nalolu chungechunge lomculo kukhona azophuma ekuzuzile,” kusho uTembe.
Uqhubeke waphawula ukuthi lo nyaka ube yimpumelelo enkulu kuKZN Philharmonic Orchestra uma kuziwa ezinhlelweni zayo zokusebenzisana nemiphakathi ehlukene eThekwini namaphethelo. Uthe izinhlelo zabo zokufundisa zifinyelele kubafundi abayizi-28 374 nabantu bamazinga ehlukene abathamele amakhonsathi abo bukhoma. “NgoNhlaba laphaya ePhoenix sihlangene noMnyango Wezemfundo neSouth Africa Schools Choral Eisteddford (SASCE), i-orchestra iphelezele ngezimfijoli abaculi abasebancane kodwa abanekhono elithembisa kakhulu besifundazwe iKwaZulu-Natal abebecula imisebenzi yabaqambi abaphambili eNingizimu Afrika oMohau Mogale, uSibusiso Njeza noLunga Dlamini.
Imisebenzi yalaba baqambi bebeyisheba neyabaqambi abahlonishwayo emhlabeni oVivaldi, uMozart noBernstein,” kuphetha uTembe obe esenxusa ukuthi abathandi bomculo nabantu abakhele lesi sifundazwe ukuba bazesekele izinhlelo zeKZN Philharmonic Orchestra.
Uhlelo lochungechunge lulonke luzoma ngendlela elandelayo
Zingama-22 kuNcwaba eDurban City Hall ligamenxe elesi-7 kusihlwa kuyobe kunoSusanne Hou edlala phambili iviolin kwenziwa umsebenzi kaFaure iPelleas et Melisande Suite, Op.80. Umsebenzi kaBruch iViolin Concerto No.1, Op.26 in g minor. Kuyobe sekuvala iSymphony No.8, Op.88 in G Major kaDvorák. Umbhidi nguDaniel Raiskin.
Zingama-29 kuNcwaba ePlayhouse Opera Theatre uDaniel Kharitonov uyobe ehlezi opiyanweni kwethulwa iDanse Macabre, Op.40 kaSaint-Saens. Kuyophinde kube nePiano Concerto No.1, S.124 in E-flat Major kaLiszt kuvalwe ngeSymphony No.2, Op.73 in D Major yona engumsebenzi kaBrahms. Oyobe ebhidisa lapha nguBernhard Guellar.
Zi-5 kuMandulo eDurban City Hall zibanjwe ngumbhidi uDaniel Bocco uGary Hoffman uyobe ezihola phambili ngecello kwethulwa umsebenzi kaRimsky-Korsakov iCappricio Espagnol, Op.34 kuvale iSymphony No.2, Op.17 in c minor kaTchaikovsky kanti nomsebenzi kaFaure iThe Elegie, Op.24 ngeke isale ngaphandle.
Ziyi-12 kuMandulo eDurban City Hall ligamenxe elesi-7 kusihlwa kuyovalwa ngeNational Youth Concerto Festival lapho kuyobe kunandisa khona intsha yakuleli ecula ngayodwana. Oyobe ebhidisa lapha uLykele Temmingh. Kuyonandiswa ngemisebenzi kaPaule, uWeber, uMozart nabanye. Abazohambela leli dili lomculo ngezinsuku ezibekiwe baqiniswa idolo ngezokuphepha kwezimoto zabo eduze kweDurban City Hall neThe Playhouse. Labo abaneminyaka engaphezulu kwama-65 bayothola isaphulelo samaphesenti ayishumi. Ngemininingwane yokuthengwa kwamathikithi kungashayelwa inombolo engu-031-3699438 noma ngokubhuka nge-Email ethi: bookings@kznphil.org.za
Posted in iBayede Kuleli Sonto, Imbiza